ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းသည် လုပ်ငန်းခွင်၊ အိမ်တွင်ဖြစ်စေ မိသားစုအတွက်ဖြစ်စေ မည်သူမဆို ရရှိနိုင်သော အရေးကြီးဆုံးစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။
BCAL သည် သင့်အသက်ကိုကယ်တင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် အရည်အသွေးမြင့် ရှေးဦးသူနာပြုနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။
အသိအမှတ်ပြုထားသော ယူနစ်- HLTAID009 သည် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
နှလုံးရပ်ခြင်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်သည်။ အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုလိုအပ်ပါသည်။ သတိလစ်ပြီး အသက်ရှူမဝတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အသိအမှတ်ပြု၊ အကဲဖြတ်နိုင်ပြီး CPR ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ စိတ်ချလက်ချ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့သူကို လိုအပ်တယ်။ ၎င်းသည် ရှင်သန်နိုင်ခြေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
CPR &amp; AED သင်တန်းတွင် Australian Resuscitation Council လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကျွမ်းကျင်မှုများ သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
"Push only" CPR လုပ်နည်း
AED ကို လျှောက်ထားပုံနှင့် လည်ပတ်ပုံ
လူက အော့အန်/ပြန်ထလာလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ
ဖိသိပ်နှောင့်နှေးမှု အနည်းဆုံးဖြင့် 1 st Aiders များ လှည့်ခြင်း။
အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများထံ လွှဲပြောင်းပေးရန် တိကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မည်သို့ယူရမည်နည်း။
သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများပါ၀င်သည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများအတွက် အသိအမှတ်ပြုပြီး ပံ့ပိုးမှုရှာနည်း။
**ပါဝင်သူများသည် မြေပြင်ပေါ်တွင် အနှောင့်အယှက်မရှိ အဆက်မပြတ် CPR2မိနစ် လုပ်ဆောင်ရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ရှိရမည်**
​ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် အင်္ဂါနေ့
ညနေ ၆း၃၀ မှ ၉း၃၀ ထိ
အခကြေးငွေ- $70 ($60 conc.)
ရှေးဦးသူနာပြု အဆင့် ၁
အသိအမှတ်ပြုယူနစ်- HLTAID010 သည် အခြေခံအရေးပေါ်အသက်တာပံ့ပိုးမှုပေးသည် (CPR ပါ၀င်သည်)
အသိပညာ၊ အတတ်ပညာနဲ့ ယုံကြည်မှုတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။
Basic Life Skills သင်တန်းတွင် အောက်ပါတို့ကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Anaphylaxis အတွက် Autoinjector Epi-Pen ကို ဘယ်လို စီမံမလဲ။
အဲယားဝေးမှာ အတားအဆီးဖြစ်နေသူတွေကို ဘယ်လိုကူညီမလဲ။
အသက်အန္တရာယ်မရှိသော သွေးထွက်သံယိုနှင့် ရှော့ခ်ဖြစ်သူများကို မည်သို့ကူညီမည်နည်း။
တစ်ယောက်ယောက် ရင်ဘတ်/ဝမ်းဗိုက် ထိခိုက်မိရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
တစ်စုံတစ်ယောက်တွင် ဦးခေါင်း/ကျောရိုး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါက ဘာလုပ်ရမလဲ
လေဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လေဖြတ်ခြင်းဝေဒနာခံစားရသူတစ်ဦးအား မည်သို့ကူညီမည်နည်း။
အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများထံ လွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက် တိကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မည်သို့ယူရမည်နည်း။
သင်ကိုယ်တိုင်ရော အခြားသူများပါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံမှု ရယူနည်း
**ပါဝင်သူများသည် မြေပြင်ပေါ်တွင်2မိနစ် အဆက်မပြတ် CPR လုပ်ဆောင်ရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ရှိရမည်**
​Tue & Thu၊ Feb 1 & 3
အခကြေးငွေ- $100 ($90 conc.)
အသိအမှတ်ပြုယူနစ်- HLTAID011 သည် ရှေးဦးသူနာပြုနည်းကို ပံ့ပိုးပေးသည် (CPR နှင့် ရှေးဦးသူနာပြုအဆင့် 1 ပါဝင်သည်)
ဥပဒေရေးရာနှင့် ရပ်ရွာအသိုက်အဝန်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့် သြစတြေးလျ ကယ်ဆယ်ရေးကောင်စီ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာနှင့် ယုံကြည်မှု။
ဤသင်တန်းသည် ချက်ခြင်းလက်ငင်းနှင့် မည်သို့အသိအမှတ်ပြုရမည်ကို သင်ကြားပေးပါသည်။
ရုတ်တရက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် နာမကျန်းမှုခံစားရသူတိုင်းအတွက် ထိရောက်သော ရှေးဦးသူနာပြုကုသမှု
Bites နှင့် stings နှင့် envenomation တွင် ဘာလုပ်ရမလဲ
အရိုးကျိုးခြင်း၊ ညောင်းညာခြင်း သို့မဟုတ် ညောင်းညာခြင်းရှိသူတစ်ဦးအား မည်သို့ကူညီမည်နည်း။
မျက်လုံး၊ နား၊ နှာခေါင်း ဒဏ်ရာအတွက် ဘာလုပ်ရမလဲ
**ပါဝင်သူများသည် မြေပြင်ပေါ်တွင်2မိနစ်ဆက်တိုက် CPR လုပ်ဆောင်ရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ရှိရမည်**
​ညနေ ၄ နာရီ၊ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ - ၁၀
အခကြေးငွေ- $180 ($170 conc.)
ရှေးဦးသူနာပြုအဆင့် UPDATE နှစ်
​ဤသည်မှာ လက်ရှိ သို့မဟုတ် မကြာသေးမီက သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသော ရှေးဦးသူနာပြုအဆင့်2အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ၃ နှစ်တာ အပ်ဒိတ်ဖြစ်သည်။
၁ ရက် အပ်ဒိတ်သင်တန်း။ အွန်လိုင်းသီအိုရီ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပါဝင်သည်။
သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၄ ရက်
မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီ
အခကြေးငွေ- $130 ($120 conc.)
ဆရာများနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများအတွက် ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း။
ပညာရေး သို့မဟုတ် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများ အတွက် အဆင့်2နှင့် ရင်ကြပ်ရောဂါ နှင့် Anaphylaxis Management တွင် ထပ်လောင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်သော ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်း။
အသိအမှတ်ပြုယူနစ်- HLTAID012 ပညာရေးနှင့် စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ဆက်တင်တွင် အရေးပေါ် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း တုံ့ပြန်မှုကို ပေးပါ။
ညနေ ၅ နာရီ၊ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ - ၁၅
အခကြေးငွေ- $220 ($200 conc.)
ပန်းနာရင်ကျပ်နှင့် ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု
အသိအမှတ်ပြုယူနစ်- 22282VIC လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊
22300VIC သင်တန်းသည် Anaphylaxis ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါတွင် အပြာရောင်သက်သာဆေးများ ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာ ပေးသည်။ anaphylaxis စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် လက်ရှိအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး လုပ်ငန်းခွင်များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဓာတ်မတည့်မှုအန္တရာယ်ကို အကဲဖြတ်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း သေချာစေပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ အင်္ဂါနေ့